ရုံးခန်း..စတိုးဆိုင်...အိမ်ဆိုင်....ဖွင့်မလား လမ်းမတန်းဆိုတော့ လမ်းညွှန်ကောင်းဆုံးနေရာ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10064999 အတွက် Phoo Pwint Real Estate Agency သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10059426 အတွက် လွှမ်းထက် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏မဂ်လာပါ🙏 📍စျေးနူန်းသင့် နေရာကောင်း ☘️မြေညီတပ်တိုက်ခန်း 📣ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10054436 အတွက် LUCKY SEVEN (Real Estate) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10044812 အတွက် Eain Thaw Tar Real Estate & Law Firm Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10036246 အတွက် White Rabbit Small Bussiness Owner co.Ltd(La Wun Aein) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10033580 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...မြောက်ဒဂုံ ဗိုလ်မင်းရောင် အိမ်ရာဝန်းထဲရှိ အခန်းလေးအသင့်ပြင်ဆင်ပြီး ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10033025 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10028328 အတွက် ကြည်မြန်မာစံ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Location ကောင်းပြီး အချက်အချာကျတဲ့ နေရာကောင်းရပ်ကွက်သန့်လေးထဲက တိုက်ခန်းအရောင်းလေး အကျိူးဆောင်ပေးပါရစေရှင့်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10020483 အတွက် ကြည်မြန်မာစံ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...မြောက်ဒဂုံ တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီး (36)ရပ်ကွက်တွင် အလွှာနိမ့်အခန်းကျယ်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးရောင်းပါမည်🙏...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10016744 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်